Jọn 4 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
4 Mgbe Onyenwe anyị matara na ndị Farisii anụwo na Jizọs nọ na-enweta ndị na-eso ụzọ ma na-eme ha baptizim+ karịa Jọn— 2 ọ bụ ezie na, n’eziokwu, Jizọs n’onwe ya emeghị onye ọ bụla baptizim kama ọ bụ ndị na-eso ụzọ ya mere— 3 ọ hapụrụ Judia gawa Galili ọzọ. 4 Ma ọ ghaghị isi Sameria gafere.+ 5 N’ihi ya, ọ bịara n’otu obodo Sameria a na-akpọ Saịka nke dị nso n’ala Jekọb nyere Josef nwa ya.+ 6 N’ezie, olulu mmiri Jekọb+ dị n’ebe ahụ. Ma ebe ike gwụrụ Jizọs na njem o mere, ọ nọdụrụ ala n’akụkụ olulu mmiri ahụ. Ọ bụ ihe dị ka awa nke isii.* 7 Otu nwaanyị Sameria bịara isere mmiri. Jizọs wee sị ya: “Nye m mmiri ka m ṅụọ.” 8 (N’ihi na ndị na-eso ụzọ ya gawara n’ime obodo ịzụta ihe oriri.) 9 Ya mere, nwaanyị Sameria ahụ sịrị ya: “N’agbanyeghị na ị bụ onye Juu, olee otú i si na-arịọ m ka m nye gị mmiri ka ị ṅụọ, ebe m bụ nwaanyị Sameria?” (N’ihi na ndị Juu na ndị Sameria adịghị emekọ ihe.)+ 10 Jizọs zara ya, sị: “A sị na ị maara onyinye Chineke na-enye n’efu+ na onye+ na-asị gị, ‘Nye m mmiri ka m ṅụọ,’ ị gaara arịọ ya, ọ gakwaara enye gị mmiri na-enye ndụ.”+ 11 O wee sị ya: “Nna anyị ukwu, i nwedịghị ihe e ji esere mmiri, olulu mmiri a mikwara emi. Oleezi ebe i si enweta mmiri a na-enye ndụ? 12 Ị kaghị+ nna nna anyị Jekọb, bụ́ onye nyere anyị olulu mmiri a, onye ya na ụmụ ya na anụ ụlọ ya ṅụkwara mmiri si na ya, ka ị̀ ka ya?” 13 Jizọs zara ya, sị: “Onye ọ bụla nke ṅụrụ mmiri a, akpịrị ga-akpọ ya nkụ ọzọ. 14 Onye ọ bụla ṅụrụ mmiri nke m ga-enye ya, akpịrị agaghị akpọ ya nkụ ma ọlị,+ kama mmiri nke m ga-enye ya ga-aghọ n’ime ya isi iyi nke mmiri+ na-asụpụta asụpụta inye ndụ ebighị ebi.”+ 15 Nwaanyị ahụ wee sị ya: “Nna anyị ukwu, nye m mmiri a, ka akpịrị ghara ịkpọ m nkụ, ka m gharakwa ịdị na-abịa ebe a isere mmiri.” 16 Ọ sịrị nwaanyị ahụ: “Gaa kpọrọ di gị bịa ebe a.” 17 Nwaanyị ahụ wee sị ya: “Enweghị m di.” Jizọs sịrị ya: “I kwutere ya, sị, ‘Enweghị m di.’ 18 N’ihi na i nweela di ise, nwoke gị na ya bi ugbu a abụghị di gị. Ihe a i kwuru bụ eziokwu.” 19 Nwaanyị ahụ wee sị ya: “Nna anyị ukwu, ana m aghọta na ị bụ onye amụma.+ 20 Nna nna anyị hà fere Chineke n’ugwu a;+ ma unu na-ekwu na ọ bụ na Jeruselem ka ndị mmadụ kwesịrị ịnọ fee Chineke.”+ 21 Jizọs wee sị ya: “Nwaanyị, kwere ihe m na-ekwu, Oge awa na-abịa mgbe ọ na-agaghị abụ n’ugwu a ma ọ bụ na Jeruselem+ ka unu ga-anọ fee Nna m ofufe.+ 22 Unu na-efe ihe unu na-amaghị;+ anyị na-efe ihe anyị maara, n’ihi na nzọpụta bidoro n’ebe ndị Juu nọ.+ 23 Otú o sina dị, oge awa na-abịa, ọ bụkwa ugbu a, mgbe ndị na-efe ezi ofufe ga-efe Nna m n’ime mmụọ+ na n’eziokwu,+ n’ihi na, n’ezie, Nna m na-achọ ka ndị dị otú ahụ fee ya ofufe.+ 24 Chineke bụ Mmụọ,+ ndị na-efe ya ofufe ga-efe ya ofufe n’ime mmụọ na n’eziokwu.”+ 25 Nwaanyị ahụ wee sị ya: “Amaara m na Mesaya+ na-abịa, bụ́ onye a na-akpọ Kraịst.+ Mgbe ọ bụla ọ bịara, ọ ga-agwa anyị ihe niile hoo haa.” 26 Jizọs sịrị ya: “Ọ bụ mụ onwe m nke na-agwa gị okwu bụ ya.”+ 27 N’oge a, ndị na-eso ụzọ ya lọghachiri, o wee malite iju ha anya na ya na nwaanyị na-ekwurịta okwu. Otú ọ dị, ọ dịghị onye sịrị: “Olee ihe ị na-achọ?” ma ọ bụ, “Gịnị mere gị na ya ji na-ekwurịta okwu?” 28 Ya mere, nwaanyị ahụ hapụrụ ite mmiri ya wee gaa n’ime obodo ma gwa ndị mmadụ, sị: 29 “Bịanụ hụ nwoke gwara m ihe niile m mere. Ọ̀ ga-abụ onye a bụ Kraịst?”+ 30 Ha wee si n’obodo pụta ma malite ịbịakwute ya. 31 Ka nke a na-eme, ndị na-eso ụzọ ya nọ na-arịọ ya, sị: “Rabaị,+ rienụ ihe.” 32 Ma ọ sịrị ha: “M nwere ihe oriri m ga-eri nke unu na-amaghị.” 33 Ya mere, ndị na-eso ụzọ ya malitere ịgwa ibe ha, sị: “Ọ̀ dị onye ọ bụla wetaara ya ihe ọ bụla ka o rie?” 34 Jizọs sịrị ha: “Ihe oriri m+ bụ ka m mee uche+ onye zitere m, ka m rụchaa ọrụ ya.+ 35 Ọ̀ bụ na unu asịghị na a ka nwere ọnwa anọ tupu owuwe ihe ubi eruo? Lee! Ana m asị unu: Welienụ anya unu lee ubi, na ihe a kụrụ na ha achaala maka owuwe ihe ubi.+ 36 Onye na-ewe ihe ubi anatawalarị ụgwọ ọrụ ma na-ekpokọta mkpụrụ maka ndụ ebighị ebi,+ ka onye na-agha mkpụrụ+ na onye na-ewe ihe ubi wee ṅụrịkọọ ọṅụ.+ 37 N’ezie, okwu ahụ bụ eziokwu na nke a, ya bụ, Otu onye bụ onye na-agha mkpụrụ, onye ọzọ bụ onye na-ewe ihe ubi. 38 Ezipụrụ m unu ka unu wee ihe ubi nke unu na-adọgbughị onwe unu n’ịrụ ya. Ndị ọzọ adọgbuwo onwe ha n’ọrụ,+ unu abatawokwa wee riwe uru ndọgbu ha dọgburu onwe ha n’ọrụ.” 39 Ma ọtụtụ n’ime ndị Sameria ndị si n’obodo ahụ pụta nwere okwukwe+ n’ebe ọ nọ n’ihi ihe nwaanyị ahụ kwuru, bụ́ onye gbara àmà, sị: “Ọ gwara m ihe niile m mere.”+ 40 Ya mere, mgbe ndị Sameria bịakwutere ya, ha malitere ịrịọ ya ka ọ nọrọ n’obodo ha; o wee nọọ n’ebe ahụ ụbọchị abụọ.+ 41 N’ihi ya, ọtụtụ ndị ọzọ kweere n’ihi ihe o kwuru,+ 42 ha wee malite ịgwa nwaanyị ahụ, sị: “Ọ bụkwaghị n’ihi okwu gị ka anyị ji kwere; n’ihi na anyị anụwo n’onwe anyị,+ anyị makwaara na nwoke a bụ n’ezie onye nzọpụta+ nke ụwa.” 43 Mgbe ụbọchị abụọ ahụ gasịrị, ọ hapụrụ ebe ahụ gawa Galili.+ 44 Otú ọ dị, Jizọs n’onwe ya gbara àmà na onye amụma adịghị enwe nsọpụrụ n’obodo nke ya.+ 45 Ya mere, mgbe ọ bịarutere na Galili, ndị Galili nabatara ya, n’ihi na ha hụrụ ihe niile o mere na Jeruselem n’oge ememme ahụ,+ n’ihi na ha onwe ha kwa gara ememme ahụ.+ 46 O wee bịaghachi na Kena+ nke Galili, bụ́ ebe o mere mmiri ka ọ ghọọ mmanya.+ Na Kapaniọm, e nwere otu onye na-ejere eze ozi nke nwa ya nwoke na-arịa ọrịa.+ 47 Mgbe nwoke a nụrụ na Jizọs esiwo na Judia pụta banye Galili, ọ gakwuuru ya wee malite ịrịọ ya ka ọ bịa gwọọ nwa ya nwoke, n’ihi na ọ nọ n’ọnụ ọnwụ. 48 Otú ọ dị, Jizọs sịrị ya: “Ọ bụrụ na unu ahụghị ihe ịrịba ama+ na ihe ijuanya,+ unu agaghị ekweta ma ọlị.” 49 Onye ahụ na-ejere eze ozi sịrị ya: “Onyenwe anyị, bịa tupu obere nwa m anwụọ.” 50 Jizọs sịrị ya: “Lawa,+ nwa gị agbakeela.”+ Nwoke ahụ kwetara ihe ahụ Jizọs gwara ya wee lawa. 51 Ma ka ọ nọ n’ụzọ na-ala, ndị ohu ya zutere ya ka ha gwa ya na nwa ya nwoke agbakeela.+ 52 Ya mere, ọ malitere ịjụ ha awa ahụ́ dịrị ya mma. Ha wee sị ya: “Ọ bụ ụnyaahụ, n’awa nke asaa,* ka ahụ́ ọkụ+ ahụ hapụrụ ya.” 53 Ya mere, nna nwa ahụ matara na ọ bụ n’otu awa ahụ+ Jizọs sịrị ya: “Nwa gị agbakeela.” Ya na ezinụlọ ya dum wee kwere.+ 54 Nke a bụkwa ihe ịrịba ama nke abụọ+ Jizọs mere mgbe o si na Judia pụta banye Galili.
^ Ihe dị ka n’elekere mbụ nke ehihie.